Izindaba - Mayelana nokusetshenziswa kwekhasethi lokushumeka kwenhlangano nezindaba ezidinga ukunakwa
Mayelana nokusetshenziswa kwekhasethi yokushumeka kwenhlangano nezinto ezidinga ukunakwa
1. Beka isicubu sezicubu kokulahlwayo ukushumeka ikhasethi ngenombolo yezicubu ebhaliwe kuyo, vala ibhokisi lokususa amanzi (insimbi engagqwali), bese ulifaka kubhasikidi osusa amanzi emshinini wokususa amanzi noma ukuzisula ngesandla.
2.Gcina okuphansi okushumekiwe kusendlalelo esingezansi kuhhavini (noma kusendlalelo esehlukile).
3.Ngesikhathi sokushumeka, izicubu ezisusiwe kanye nebhasikidi lokwehla kwamanzi emzimbeni zifakwa kuhhavini elifanayo ne-embedding bottom ifa. Vula isembozo sebhokisi elingenisa amanzi, beka isivalo eceleni, khetha isikhunta eshumekiwe esingezansi ngosayizi webhulokhi lezicubu, usifudumeze kusibani sotshwala ngezifinyela, cindezela ibhulokhi yezicubu bese usifaka kusikhunta esingezansi, bese umboza nebhokisi elilahliwe elilahliwe elinenombolo yebhulokhi yezicubu ebhalwe kuzicubu ezingenamanzi, lahla i-wax kapharafini omncane, ukuze ingachichimi, bese uyishiya isikhashana.
4.Khipha ibhokisi leqhwa efrijini, ubeke ibhokisi elihlanganisiwe le-wax ebhokisini leqhwa bese ulimisa cishe i-5 min10 min. Isikhathi sifushane ebusika futhi side ehlobo.
5.Tushumeke isikhunta esingezansi nesembozo sebhokisi elehlisa amanzi sihlelwa bese sifakwa kuhhavini ngokuma. Isembozo sebhokisi elehlisa amanzi sifakwa kubhasikidi onciphisa amanzi, futhi i-wax ingafakwa ngamanzi ashisayo ngaphambi kokusebenzisa okulandelayo.
Le ndlela ayizuzi nje kuphela ngokulondolozwa kwe-wax block, kepha futhi yonga uphalafini.
(1Isembozo sokulahlwayo ukushumeka ikhasethi yakhiwe ngebhokisi lokwehlisa amanzi emzimbeni.
(2) Uma singekho isiqandisisi, ibhlokhi esanda kufakwa engafakwanga yomgunyathi kanye nesikhunta esingezansi singabekwa ekamelweni lokushisa isikhathi eside, bese kuthi i-wax block isuswe kusikhunta esingezansi.
U-Huida unolwazi lweminyaka eminingi ekukhiqizeni nasekusebenzeni kwe ukushumeka ikhasethi nezimboni amazinga aphezulu. Ulayini womkhiqizo ucebile futhi ungahlangabezana neningi lezicelo zokuhlola zokushumeka kwamakhasethi. Woza ukhethe imikhiqizo efanele yezinhlelo zakho zokusebenza zokuhlola.